मनिषा कोइराला भन्छिन् - क्यान्सरले मलाई स्वस्थ्य जीवन जीउन सिकायो
Thursday,5Sep, 2019 10:32 AM
बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफनै जीवनमा क्यान्सर जस्तो भयानक रोगसँग लडनु नपरेको भए सायदै उनी योग अभ्यास सम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यक्रममा यति सक्रिय हुने थिईनन् होला । सन् २०१२ मा उनलाई पाठेघरको क्यान्सर देखियो । क्यान्सर देखिएको तीन वर्षपछि उनी त्यसबाट मुक्त पनि भइन् । त्यसपछिका दिनहरुमा बलिउडको कलाकारिता क्षेत्रमा मात्रै सिमित मनिषा रोगविरुद्ध लड्ने क्रममा योग ध्यान र जीवन शैलीका बारेमा आफुले जानेका कुरा सिकाउन र अरुको प्रेरणाको स्रोत बन्न थालेकीे छन् ।
आजभोली उनलाई हरेक कार्यक्रममा रोग बिरुद्ध आफना अनुभब राख्न बोलाइन्छ र मनिषाले शुरुमै भन्छिन, ’मेरो स्वास्थ्यमा समस्या नआएको भए सायदै म योगमा लाग्थे हुँला । तर, क्यान्सरलाई पराजित गरेपछि म योगमा लागें, ‘हुन त म योगविज्ञ हैन । तर योग सुरु गरेपछि मेरो स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आएको छैन।’ बलिउडकी प्रख्यात अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफ्नो जीवनयापनका कारण नै स्वास्थ्यमा समस्या आउने बताउने गरेकी छन् ।
बुधबार नेसनल हस्पिटल एण्ड क्यान्सर रिर्सच सेन्टर प्रालि र क्यान्सर केयर नेपालले आयोजना गरेको ‘डिम्बाशयको क्यान्सर’ विषयको अन्तक्र्रियामा आफ्ना अनुभव सुनाउन भारतबाट नेपाल आएकी अभिनेत्री कोइरालाले आफू अस्पतालको श्ययामा उपचार गराइरहँदा आफ्नो जीवनशैली, खानपानले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने महसुस गरेको अनुभव सुनाइन् ।
करियर एउटा उचाइमा पुगेको थियो, त्यस समय उनलाई काम काम काम मात्रेै ध्यान थियो । उनले शरीरलाई आराम पनि आवश्यक पर्छ भन्ने ख्यालै गरिनन् त्यही समयमा क्यान्सर भएको थाहा भयो, क्यान्सर भन्ने शब्द नै डरलाग्दो छ, यसले सिधै मृत्युलाई बुझाउने सोचका कारण थप पीडा भएको थियो तर परिवारको आत्मविश्वास र शुभकामनाले मलाई दोस्रो जीवन दियो, उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन, म चिकित्सक होइन, तर म केही अवश्य भन्न सक्छु । भन्छन् नि, ‘रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस।’ भरसक हामी सचेत हुनुपर्छ कि हामीलाई क्यान्सर नलागोस ्। त्यसको लागि रोग निरोधक जीवनशैली अपनाउन नै आवश्यक छ ।
मनिषाले हामी कसरी स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताईन । तर सत्यता के हो भने, यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी बिरामी परेपछि मात्र हाम्रो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न थाल्छौं उनले भनिन् । हामीलाई थाहा छ, स्वास्थ्य भएन भने हामी जीवनमा आएका कुनै पनि खुसीहरुमा रमाउन सक्दैनौँ । यसको लागि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न जरुरी छ तर हामी त्यसो गदैनौ । उनले सुझाब दिदै भनिन, यदि स्वस्थ्यकर जीवनशैली अपनाउँदा अपनाउँदै पनि हामीलाई क्यान्सर भइहाल्यो भने पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन । यहाँ एकदमै पोख्त चिकित्सकहरुको टोली छ, बस तपाई उहाँहरुको सम्पर्कमा आउनुर्र्छ । नआत्तिकन पूर्ण विश्वासका साथ उपचार गर्नुहोस् ।
कार्यक्रममा मनिषाले आफनोे चौथो तहको क्यान्सर निको भएको प्रसंग सुनाएकी थिइन । उनले भनिन, अहिले म क्यान्सर मुक्त छु, अहिले ७ वर्ष भयो । क्यान्सरपछि पनि जीवन झनै राम्रो हुने उनको तर्क छ । उनले क्यान्सर अगाडिको जीवन भन्दा अहिले उत्तम जीवन जिउने गरेको बताईन् । पीडा भइसकेको मान्छेले, भोगेको मान्छेले सचेत भएर जीवन जिउँछ । पीडामा नभएको र दुख नउठाएको मान्छेले अलिकति लापरवाह जीवनशैली जीउने रहेछ उनले आफनो अनुभब सुनाईन । क्यान्सरले मलाई स्वस्थ्य जीवन जीउनु अति आवश्यक रहेछ भन्ने बोध गरायो र जीवनलाई रमाएर जिउन सिकायो ।
उनले अन्तमा सवैलाई जीवनको बास्तविकता तर्फ डोहरयाउदै भनिन् , हामी जति बाँच्छौ, किन खुसी हुन सक्दैनौ ? हामी एकपल्ट जाने नै हो नि । हामीलाई दुखी बनाउने कुरालाई किन छोड्न सक्दैनौँ र हाम्रो सकारात्मक सोचलाई हामी किन अरुसँग बाँड्न सक्दैनौँ ? मलाई के लाग्छ भने एउटा सुखी र स्वस्थ्य मान्छेले अरुलाई पनि केही योगदान गर्न सक्छ । हामी यस्तो जीवनलाई डोरयाइरहेकोमा खुसी हुनुपर्छ ।’
करिब ८० भन्दा बढि हिन्दी फिल्मका साथै तेलेगु, तमिल, बेङलुरु, नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेकी कोइरालाले क्यान्सरविरुद्ध जीत हासिल गरेपछि भने क्यान्सरबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रममा आफूलाई सक्रिय राख्दै आएकी छन् ।